Polysius - Kinne Maskinteknik AB
Polysius hammer crusher.
Warshadaha burburin ee loo yaqaan 'Polysius burburin' dhagxaan.
Burburku wuxuu ka dhacay baloog 3 mitir ah oo cabbirkiisu hooseeyo ilaa cabbirkiisu yahay 40 mm hal tallaabo.
Thanks to culeyska weyn ee rotor, 25 tan iyo flywheels 10 tan, burburiyuhu wuxuu sidoo kale ku habboon yahay burburin agabyo kale duwan oo kaladuwan sida marble, dhagaxa dhagaxa ah, 'quartzite', dolomite, mica, linte copper, calcite, talc, plaster.
Cilladaha ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu burburiyo jirridka wax soo saarka biofuel ee gubashada. Stumps ayaa sidoo kale loo jajabiyey soo saarida jaakadaha waaweyn iyada oo yareyneysa sheyga ku jira dhalaalidda biraha birta.
Miisaanku wuxuu kaloo macnaheedu yahay isticmaalka korantada inuu hooseeyo.
Miisaanka rotorka iyo fuustoleydu waa 35 tan. Qalabka wax dhaqaajiya ayaa leh istaroog dabacsan. Istaroog kasta wuxuu culeyskiisu yahay ilaa 120 kg.
Rotor dheeri ah ayaa la heli karaa.
Isugeynta culeyska geedka burburintiisa waa 75 tan.
Koronto 400 kW.
Qalabka fudfudud ayaa si fudud looga saari karaa gaadiid.
Aarandaro leh awood la mid ah tan aan iibka ku heysan jirnay ayaa ah FL Smidth 500 oo tan.
Rotor dheeraad ah
Xiro ka dib 3.5 milyan oo tan oo ah dhagaxa nuuradda.